Watchdogs Condemn Rearrest of Journalist Chin'ono in Zimbabwe - allAfrica.com
Barely two months after his release on bail, Hopewell Chin'ono, a prominent critic of President Emmerson Mnangagwa, has been rearrested, this time on charges of contempt of court relating to a tweet. The award-winning journalist was released on bail in September after spending close to two months in remand prison on charges of inciting Zimbabweans to revolt against President Emmerson Mnangagwa for failing to run the affairs of the southern African country. Meanwhile, media rights groups have described Chin'ono's arrest as an attack on media freedom in Zimbabwe.
New Zimbabwe, 4 November 2020
Police intend to press corruption charges against journalist Hopewell Chin'ono who was arrested Tuesday on separate allegations of posting messages on Twitter that impaired the… Read more »
RFI, 2 November 2020
On 2 November, International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, there are concerns that cases of physical attack and harassment of media representatives in several… Read more »
Zimbabwe: Chin'ono Arrested Again Over Claims Chief Justice Malaba Interfering With His Trial
JOURNALIST Hopewell Chin'ono has been arrested over Twitter claims Chief Justice Luke Malaba was interfering with his case. Read more »
The Herald, 4 November 2020
Political activist Hopewell Chin'ono was arrested yesterday for contempt of court and defeating or obstructing the course of justice. Read more »
Members of the Zimbabwe National Army are not trained to feed porridge to the masses, but to ruthlessly crush any public protests, Deputy Defence Minister Victor Matemadanda has ... Read more »
Zimbabwe: 'Army Not Trained to Feed Porridge, but Crush Anti-Govt Protests'
Zimbabwe: ConCourt Orders Govt to Investigate Army, Police Over Violence